Inona no tetika loko tsara ho an'ny fantsona YouTube anao? - YTpals
Na dia mety ho toy ny fanapahan-kevitra tsy dia misy dikany aza izany amin'ny voalohany, ny fanapahan-kevitra momba ny loko tsara ho an'ny fantsona YouTube-nao dia tena ilaina amin'ny fiantohana ny fahombiazanao eo amin'ny lampihazo. Ny loko dia fantatra fa misy fiantraikany lalina amin'ny fihetseham-pon'ny olona. Nohamafisin’ny maro izany zava-misy izany fampianarana koa. Ny mason'olombelona dia afaka manavaka loko 10 tapitrisa, ary ny fianakaviana loko tsirairay dia miteraka karazana fitondran-tena samihafa amin'ny olona iray. Amin'ny alàlan'ny fandrafetana ny estetika YouTube anao amin'ny fomba mety, azonao atao ny mamporisika ny olona hifanerasera amin'ny fantsonao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome anao torolàlana momba ny fisafidianana loko mety amin'ny fantsona YouTube anao izahay, izay hanampy amin'ny fitarihana ny fihetseham-pon'ny mpijery amin'ny lalana marina.
Fahatakarana ny psikolojia ny loko
Tsy maintsy nisy fotoana izay nitsindrianao horonan-tsary na fantsona YouTube noho ny antony iray fotsiny - palette miloko manintona. Azo hazavaina amin’ny alalan’ny psikolojia loko. Ny zava-misy dia ny loko tsirairay dia manana matetika ny halavany, ny halavany ary ny spectrum. Ny loko tsirairay dia manana fiantraikany hafa amin'ny eritreritry ny olona, ​​​​ny fihetseham-pony ary ny fitondran-tena. Ity misy topimaso momba ny vokatry ny loko samihafa -
Mena: Ity loko ity dia fantatra fa miteraka fihetseham-po mahery vaika. Manampy amin'ny famoronana fahatsapana maika sy fampitomboana ny tahan'ny fo izany. Afaka manampy amin'ny famporisihana ny fahazotoan-komana ihany koa izy io, izay mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny horonan-tsary mifandraika amin'ny sakafo.
Mavo: Ity loko ity dia midika hafanana, hafaliana ary mazava ary fantatra fa manentana ny fizotran'ny saina. Ny mavo dia afaka manampy amin'ny famporisihana ny fifandraisana.
Blue: Ny manga dia loko tsy manafika izay maneho fahatoniana sy fahatoniana. Manampy amin'ny famoronana fahatsapana fahatokisana sy fiarovana amin'ny marika izy io satria io loko io dia heverina ho tsy miova amin'ny fiainan'ny olombelona.
Voasary: Ity loko ity dia maneho hafanana ary maneho koa ny hafanam-po sy ny fientanentanana. Mifandray akaiky amin'ny famoronana izy io ary azo ampiasaina hanehoana ny sarin'ny marika falifaly, matoky tena ary sariaka.
Volomparasy: Ny loko volomparasy dia maneho ny mpanjaka, ny fahendrena ary ny fahombiazana, ary azo ampiasaina hanehoana ny sarin'ny marika sary an-tsaina sy mamorona.
Mifidiana ny rafitra loko ho an'ny fantsona YouTube-nao
Ankehitriny rehefa manana fahatakarana fototra momba ny psikolojia miloko ianao dia hiroso amin'ny fizotry ny fisafidianana ny lokon'ny fantsona YouTube anao izahay. Ity misy fomba tsikelikely hanaovana izany -
Eritrereto ny toetra tianao haseho amin'ny alalan'ny fantsonao sy ny momba azy. Manapaha hevitra amin'ny teny fanalahidy sasany mamaritra azy tsara indrindra.
Karohy amin'ny sary Google na Pinterest ireo teny fanalahidy ireo, ary jereo ny sary mifandray amin'ireo teny fanalahidy ireo. Tehirizo sary vitsivitsy ho an'ny teny fototra tsirairay.
Mamorona tabilao misy fihetseham-po amin'ny fampifangaroana ny sary rehetra voatahiry. Azonao atao ny mampiasa Canva na mpanonta hafa ho an'ny tanjona.
Ampiasao ny tabilao misy fihetseham-po mba hifidianana vitsivitsy amin'ireo loko tianao indrindra. Eritrereto izay loko mety tsara indrindra amin'ny lohahevitry ny fantsonao.
Azonao atao ny misafidy loko mangatsiatsiaka sy mafana ho an'ny rafitra lokonao, izay hanampy amin'ny fampivoarana ny marika famantarana ny fantsona. Tehirizo ny loko 3 ka hatramin'ny 4 farafahakeliny.
Avy amin'ny lisitry ny loko voafidy, mila manapa-kevitra amin'ny lokon'ny hetsika ataonao ianao, ny loko fototra ary ny loko fototra. Ny loko fototra dia tokony ho solontenan'ny toetra manjaka amin'ny fantsona YouTube-nao. Ny lokon'ny hetsika kosa dia tokony ho loko mampipoitra ny fantsonao. Tena tianao ny hamorona fifanoherana be eo amin'ny hetsika sy ny loko fototra. Ny zavatra farany tsy maintsy ataonao dia ny mifidy ny loko fototra, izay natao handanjalanjana ny loko fototra sy ny hetsika. Mety ho malefaka na maizina izy ireo, miankina amin'ny loko sisa nofidinao.
Rehefa avy nisafidy ny lokonao ianao dia afaka milalao miaraka amin'izy ireo mba hahitana ny fomba hifandraisany amin'ny lohahevitry ny fantsonao. Azonao atao ihany koa ny manandrana endri-tsoratra sy fiaviana mba hampisongadina ny marika fantsonao. Miaraka amin'ny rafitra loko mety, dia ho afaka handrakitra betsaka amin'ny YouTube ianao ao anatin'ny fotoana fohy.
Miaraka amin'izany, nandrakotra ny zava-drehetra tokony ho fantatra momba ny fisafidianana loko tsara ho an'ny fantsona YouTube-nao izahay. Ireo toro-hevitra sy tetika voalaza etsy ambony dia hanampy anao hametra ny loko izay maneho tsara indrindra ny fantsonao, izay azo antoka fa hitarika ho amin'ny firotsahana amin'ny mpihaino tsara kokoa. Raha mitady fomba hafa hanamafisana ny fitomboan'ny fantsona YouTube ianao dia eto ho anao ny YTpals.com. Manome tolotra isan-karazany toy ny maimaim-poana YouTube tia ary fijerena YouTube maimaim-poana, izay afaka manampy amin'ny fitomboana organika ny fantsonao. Izahay, ao amin'ny YTPals, dia manome antoka fiarovana 100% amin'ny serivisy rehetra. Raha liana amin'ny iray amin'ireo serivisy YouTube premium ianao dia afaka mifandray aminay anio!
Inona no tetika loko tsara ho an'ny fantsona YouTube anao? avy amin'i YTpals Writers, 26 Aprily 2022
Ahoana ny fomba handehanana amin'ny dokam-barotra amin'ny corona ambony ao amin'ny YouTube?
Ny tena marina dia ny horonan-tsary dia natao hametrahana ny ho avin'ny marketing. Ireo mpivarotra manerantany dia tsy mihevitra afa-tsy sehatra media sosialy hafa, fa YouTube, amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny varotra horonan-tsary. Amin'ny taona 2019, ny fandefasana horonantsary…
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny bilaoginao momba ny natiora ao amin'ny YouTube mandritra ny areti-mandringana?
Ireo bilaogy natiora dia nahita fiakaran'ny lazan'ny olona tato ho ato. Na dia tamin'ny vanim-potoana talohan'ny Youtube aza, dia tian'ny olona ny mahita ny zava-mitranga eo amin'ny natiora sy ny karazana zavatra eo. Discovery…
Hevitra ho an'ny Youtube Youtube latsaky ny 30 segondra izay hampitombo ny mpijery
Lahatsary fohy no nahatezitra hatramin'ny nanapoahana ny TikTok. Raha mifaninana amin'ny TikTok momba ny endrika vaovao an'ny teo aloha ny Instagram, fotoana vitsy monja talohan'ny nahatongavan'i YouTube niaraka tamin'ny karazany hafa…